बझाङका नारीलाई किन बन्यो ? महिनावारी अभिषाप ! - Nayapul Online
बझाङका नारीलाई किन बन्यो ? महिनावारी अभिषाप !
प्रकाशित मिति : Monday, July 9, 2018 nayapulonline
असार २५, लोकण्डमा महिनावारी हुँदा महिलाहरुलाई गरिने व्यवहार अत्यन्तै निर्मम छ । ‘छाउपडी’लाई ठूलै सरुवा रोग लागेको बिरामीलाई जस्तै व्यवहार गरिन्छ । कतिपय मान्छे छाउपडी हिँडेको बाटो पनि हिँड्दैनन् र गाई वस्तुलाई समेत हिँडाउँदैनन् ।
अनमी अनिताले छाउ गोठमा बस्नुपर्दा रातभर निदाउन नसकेको अनुभव सुनाइन् । ‘एक रात काट्न त यति गाह्रो भयो भने यहाँका महिला हरेक पटक महिनावारी हुँदा छाउगोठमा कसरी बस्दा होलान् ?’ अनिताले प्रश्न गरिन् ।
देउता रिसाउने र अनिष्ट हुने अन्धविश्वासमा लोकण्डवासी छाउ बार्न गाउँबाट टाढा जान्छन् । छाउ भएकी मात्रै होइन, सुत्केरी भएका महिलाले समेत जंगलमा बनाइएका कटेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ यहाँ । चिसो र संक्रमणका कारण कतिपयले नवजात शिशु नै गुमाएका छन् ।
७ दिनको नवजात छोरालाई छाउ गोठमा छोडेर नुहाउन गएकी जलादेवी रोकायाले नुहाएर फर्किदा छोरो भेटाइनन् ।
जंगलभरी खोज्दा खोल्सामा हड्डीको सानो टुक्रा मात्र भेटियो । बच्चालाई जंगली जनावरले खाइसकेको रहेछ ।
यो घटना ८ वर्ष अघिको हो । २०६६ सालमा १२ दिनकी नवजात छोरीलाई छाउ गोठमै छोडेर गहुँ काट्न गएकी पिउली रोकायाले त्यसरी नै सन्तान गुमाउनु पर्‍यो । ‘बाघले खायो कि, भालुले केही थाहा भएन,’ १२ दिनकी छोरी गुमाउँदाको पीडा सुनाउँदै पिउलीले भनिन्, ‘छोरीको लाशसमेत भेटिएन ।’
उपकुलपति कोइरालाले शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेश भ्रमण अनुमति नलिईएको पुष्टि
अभिनेत्री जान्हवी कपूर पाइलटको लुकमा: तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
सेयर बजारमा गिरावट
बुधबार सेयर बजारमा ३० अंकको वृद्धि
कम्युनिष्ट शक्तिलाई कमजोर पार्न स्वदेशी र विदेशी शक्ति लागिरहे: प्रचण्ड
यस्तो छ…. कक्षा २ मा पढ्ने बालकको सुसाइड नोट
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली शनिबार स्वीटजरल्याण्ड भ्रमणमा
वृहस्पति र जेभियरको विजयी शुरुवात
हजारौं लिटर अबैध मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ नष्ट